IDEAL, 17 taona Toy ny zaza 8 taona ny vatany, te-ho mpilalao sarimihetsika
Tovolahy efa 17 taona i Ideal, taona faha-11 ao amin’ny lisea Jean Ralaimongo ao Ankofafa Fianarantsoa.
Tsy mbola vaky feo anefa izy ary mijanona ho kely toy ny an’ny zaza vao 8 taona ihany koa ny vatany. Mahay izy ary vory tsara ihany koa. Faniriany ny ho lasa mpilalao horonan-tsarimihetsika malaza, mitana ny andraikitry ny ankizy ho mpilalao fototra. Raha araka ny resaka nifanaovany tamin-dreniny dia amin’izay, hono, izy lasa zazakely misaina tsara raha zazakely no fijeren’ny olona ny vatany. Mangataka amintsika mpilalao sarimihetsika malagasy sy izay efa mpikirakira izany i Ideal sy ny reniny handray azy. Marihina moa fa tsy mahalala olona izy ireo, antony nanaparitahany ny vaovao tao anaty tambajotran-tserasera facebook.